पुरञ्जन आचार्य - | Nagarik News - Nepal Republic Media
पुरञ्जन आचार्यका लेखहरु :
पुरञ्जन आचार्य १५ पुस २०७६ मंगलबार १९ मिनेट पाठ
पुरञ्जन आचार्य १ पुस २०७६ मंगलबार १९ मिनेट पाठ
कांग्रेस को, कता र कस्तो ?
दुई साताअगाडि गैरआवासीय नेपालीको सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका केही सदस्यसँग राजनीतिक कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा मेरो भेटघाट भयो। कोही जिज्ञासु थिए– देशको अर्थ राजनीतिबारे। संस्थासँग आबद्ध पुराना तर अहिले सम्मेलनबाट टाढिएका केही मित्र, बडो गहिरो रुचिसाथ नेपालको भविष्य र त्यसमा भूराजनीतिको महत्वबारे छलफल गर्न आए। कोही कांग्रेस राजनीतिका विषयमा निराश देखिन्थे। धेरैजसोले पार्टी र नेताविरोधी विचार व्यक्त गरे।
पुरञ्जन आचार्य १९ कार्तिक २०७६ मंगलबार १८ मिनेट पाठ
पुरञ्जन आचार्य ५ कार्तिक २०७६ मंगलबार १६ मिनेट पाठ
पुरञ्जन आचार्य २८ जेष्ठ २०७६ मंगलबार १९ मिनेट पाठ
मोदी जीतबाट सिक्ने कुरा
भारतमा लोकसभाको निर्वाचनमा पराजयपछि राहुल गान्धीले पार्टी अध्यक्षबाट नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामाको प्रस्ताव राखेका छन् । देउवाबाट त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक संस्कृति पनि प्रकट भएन।
पुरञ्जन आचार्य १४ जेष्ठ २०७६ मंगलबार १८ मिनेट पाठ
पुरञ्जन आचार्य १७ वैशाख २०७६ मंगलबार १८ मिनेट पाठ
पुरञ्जन आचार्य ३ वैशाख २०७६ मंगलबार १८ मिनेट पाठ
प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्नो पूरा नाम ‘खड्गप्रसाद ओली’ सुन्न र लेख्न खासै मनपराउँदैनन् अरे। प्रमलाई आफ्नो संक्षिप्त नाम ‘केपी ओली’नै प्यारो छ।आफूप्रम निकटदावा गर्ने एकजना विराटनगरतिरका कमरेडले मलाई सुनाए। मलाई प्रमको नाम केपी ओली वा खड्ग ओली जे भए पनि मतलव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर मन नपर्ने नामबाट अब सम्बोधन नगरौँला भनी कामरेड मित्रलाई विश्वस्त पारे।
पुरञ्जन आचार्य ५ चैत्र २०७५ मंगलबार १६ मिनेट पाठ
रूपावासी सर र अधिकारीद्वय
गुरु बालकृष्ण पोख्रेललाई हामी ‘रुपावासी’ सर भन्थ्यौँ। विराटनगरमै बसी भाषा र साहित्यको साधना गर्ने गुरु आज हामीबीच रहनुभएन। आजभन्दा चार दशकअगाडि विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजमा म नेपाली साहित्यको विद्यार्थी थिएँ रूपावासी सरको। अर्थशास्त्र प्रमुख विषय लिएर सहायकमा नेपाली साहित्य लिएका कैयन् विद्यार्थीमध्ये म पनि एक शिष्य थिएँ स्नातक पढ्दा रूपावासी सरको। विषयगतरूपमा हेर्दा यो अलि अनमेल जोडी थियो। तर बेजोड हुनुहुन्थ्यो रूपाबासी सर।
पुरञ्जन आचार्य २१ फाल्गुन २०७५ मंगलबार १८ मिनेट पाठ
‘लुट्न सके लुट कान्छा’ को मर्म
फागुनको ४ गते शनिबार मध्याह्नको १२ः४५ भएको थियो। हामी बिपी मार्ग हुँदै विराटनगरबाट काठमाडौँ आउँदै थियौँ। तराईतर्फको यात्रा सकिएर सिन्धुलीको ‘सेल्फी डाँडा’ भनिने ठाउँ आइपुगेका थियौँ, असिना पर्न थाल्यो। फागुन महिनामा हुरी, बतास, पानी र असिना पर्नु सामान्य भए पनि सेल्फी डाँडाबाट उकालो चढ्दै गर्दा असिनाले व्यापक र कहालीलाग्दो रूप लियो।
पुरञ्जन आचार्य ७ फाल्गुन २०७५ मंगलबार १५ मिनेट पाठ
दक्षिण एशियामा ब्रिटिस उपनिवेशले कैयन् सभ्यता छाडेर फर्किए। त्यसमध्ये राजनीतिमा संसदीय व्यवस्था र खेलमा क्रिकेट पनि हो। ब्रिटिसहरूले बोल्ने अंग्रेजी भाषा दक्षिण एशियामा मात्र सीमित रहेन। यो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भयो।नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्नाले संसदीय व्यवस्था भन्ने नै बुझिन्छ। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सत्तापक्ष छ भने नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। सत्तापक्षले एकवर्ष पूरा गर्दैछ। एकवर्षमा सत्तापक्षले राजकाजमा खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन र चर्चा चलिनैरहेका छन्। यहाँ प्रतिपक्षले एकवर्षमा खेलेको भूमिकाको चर्चा सान्दर्भिक होला। तर त्योभन्दा अगाडि पारस खड्काको नेपाली क्रिकेट टिमले युनाइटेड अरव इमिरेट्समा प्राप्त सफलताको चर्चा जनमानसमा बढी भएकाले क्रिकेटवाट कुरा अगाडि बढाउँ।
पुरञ्जन आचार्य २२ माघ २०७५ मंगलबार १९ मिनेट पाठ
एक्लो वृहस्पति डा. केसी
प्राथमिक विद्यालयदेखि हाइस्कुल हुँदै कलेज जीवनसम्म पनि नेपालका गुरुहरूले के भएर हो कुन्नि ‘कला र विज्ञान’ बारे निवन्ध लेख्न लगाइरहन्थे। प्राथमिक स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढ्दा पनि यो निवन्धले कहिल्यै पिछा छाडेनन्। केही विषय नै त्यस्ता हुन्छन् जसलाई कुनै उमेर र समयले चर्चा गर्न रोक्दैन। ‘कलम ठूलो कि तरवार ठूलो’ भन्ने अर्को निवन्ध पनि त्यसैगरी शताब्दियौँदेखि मानव सभ्यताबीच चर्चा, बहस र छलफलको विषय बनिरहेकै छ।
पुरञ्जन आचार्य ८ माघ २०७५ मंगलबार १७ मिनेट पाठ
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीद्वारा संसदमा संप्रेषित सरकारको रिपोर्ट कार्ड सुनियो।अंग्रेजी वर्ष २०१८ समाप्त भएर सम्पूर्ण विश्व नयाँ वर्षको हर्षोल्लासमय वातावरणमा छ अहिले। यही वातावरण र अंग्रजी नयाँ वर्षमा हाम्रा प्रमलाई झण्डै एक वर्षको प्रगति समीक्षा संसद्समक्ष राख्ने जाँगर चलेको हुनुपर्छ।
पुरञ्जन आचार्य २४ पुस २०७५ मंगलबार १७ मिनेट पाठ
गौरवमय इतिहास,जिम्मेवार वर्तमान र उज्यालो भविष्यको नारासहित सुरु भएको नेपाली कांग्रेस महासमितिको वैठक आइतबार समापन भयो। उद्घाटन सत्रको चहलपहल हेर्न म केही साथीहरूसँग उद्घाटनस्थल पुगेको थिएँ। धेरै नयाँ अनुहार कांग्रेसमा देख्दा पार्टीको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने लाग्यो।सहभागिता समावेशी थियो।
पुरञ्जन आचार्य १० पुस २०७५ मंगलबार १७ मिनेट पाठ
पुरञ्जन आचार्यका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्